KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mam Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mende Mixe (North Central) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Yegye di sɛ yɛwɔ ahonim pa, efisɛ yɛpɛ sɛ yɛde nokwaredi bɔ yɛn bra biribiara mu.”​—Hebrifo 13:18.
Onyankopɔn Asɛm ma yehu sɛ bɔne wɔ yɛn ho, enti ɛnyɛ den koraa sɛ yɛbɛyɛ adebɔne. Genesis 8:21 ka sɛ: “Onipa komam nsusuwii yɛ bɔne fi ne mmofraase.” Enti yɛpɛ oo, yɛmpɛ oo, ɛsɛ sɛ yɛko tia bɔne a ɛwɔ yɛn mu no. Ɔsomafo Paulo kyerɛkyerɛɛ sɛnea ɔne bɔne dii ako no mu sɛ: “Me mu de, m’ani gye Onyankopɔn mmara ho yiye, nanso mihu mmara foforo bi wɔ m’akwaa mu a ɛne m’adwene mu mmara ko na ɛfa me dommum ma bɔne mmara a ɛwɔ m’akwaa mu no.”​—Romafo 7:22, 23.
“Midii mfe 13 no, migyaee sukuu de me ho kɔbɔɔ akorɔmfo kuw bi. Ɛno nti, m’ahode a na mewɔ nyinaa, na emu dodow no ara yɛ akorɔnne. Akyiri yi mewaree, na me ne me kunu fii ase ne Yehowa Adansefo suaa Bible. Yesua hui sɛ Yehowa * Nyankopɔn kyi nnaadaa ne nsisi biara, enti yɛsesaa yɛn suban. Afei afe 1990 mu no, me ne me kunu nyinaa hyiraa yɛn nkwa so maa Yehowa, na wɔbɔɔ yɛn asu ma yɛbɛyɛɛ Yehowa Adansefo.”​—Mmebusɛm 6:16-19.
“Bere bi, m’adwumam panyin huu sɛ obi rema me braeb nanso mannye, enti ɔka kyerɛɛ me sɛ: ‘Wo Nyankopɔn a woresom no no ama woayɛ nokwaredifo. Ɛyɛ yɛn dɛ sɛ yɛwɔ obi te sɛ wo wɔ adwuma yi mu.’ Me nokwaredi wɔ biribiara mu nti, Yehowa Nyankopɔn hu sɛ me tirim fann. Eyi ma mitumi boa m’abusua ne afoforo ma wɔn nso wodi nokware.”​—Sonny, Hong Kong.
“Bere bi, nneɛma bi yerae wɔ adwuma mu, na me panyin kaa sɛ minni atoro, nanso mamfa me ti annye. Akyiri yi wohuu wɔn a wɔfaa nneɛma no, na m’adwumawura daa me ase sɛ mekaa nokware. Wiase no mfa nokwaredi nyɛ hwee, enti sɛ obi betumi adi nokware a, egye akokoduru. Nanso sɛ yemia yɛn ani di nokware a, nkurɔfo begye yɛn adi na wɔabu yɛn.”​—Kaori, Japan.
Share Share Nokwaredi—Nea Enti a Mfaso wɔ So
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Wudi Nokware?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Wudi Nokware?
Share Share ƆWƐN-ABAN Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Wudi Nokware?
Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Wudi Nokware?
ƆWƐN-ABAN Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Wudi Nokware?